Jubilee oo taageero ka raadineyso deegaanada Ukamban | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Jubilee oo taageero ka raadineyso deegaanada...
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto ayaa lagu wadaa inay booqasho sadex maalmood ah ku tagaan deegaanada laisku yiraahdo Ukambani. Socdaalkaasi Jubilee ee ay ku mari doonto kowntiyo dhowr oo ay ka mid yihiin machakos, makueni iyo Kitui ayaa lagu wadaa inay taageero kaga soo helaan deegaanadaasi xilli wadanka uu wajahan yahay doorashada guud ee dalka ka qabsoomi doonto. Dadka falan qeeyo siyaasada dalka ayaa horay u sheegay isbaheysiga talada hayo inuusan doorashii hore ee dalka ka qabsoontay ku fashilmeen deeganada ay hadda u xusul duubayaan. Gavanaha kowntiga Machakos Alfred Mutua oo isagu hor kacayo ololaha Jubilee ayaa u qaylo dhaamiyey isbaheysiga. Guud ahaan dalka ayaa waxaa ka soconayo xurguf siyaasadeed oo koox kastana dadaal ugu jirto cidii qaban lahayd calanka dalka ka lalman doono.